म्याउँ–म्याउँ किन गर्छ बिरालो ? – Radio RajMarga 92.1 MHz
म्याउँ–म्याउँ किन गर्छ बिरालो ?
बैशाख ९ । बिरालो किन म्याउँ गर्छ प्रश्न सामान्य छ, तर जवाफ सामान्य छैन । जब बिरालोलाई हामी मायाले चलाउँछौँ तब ऊ म्याउँ गरेर आफ्नो खुसी व्यक्त गर्छ । तर, बिरालोले म्याउँ गर्नुको रहस्य यति मात्रै होइन ।
म्याउँ गर्नुको कारण यही हो त
विज्ञानले पत्ता लगाएअनुसार कण्ठबाट हावा चल्दा बिरालोको मुखबाट यस्तो आवाज निस्किन्छ । तर, यो आवाज बिरालोले किन निकाल्छ रु
ब्रिटेनकी मरजान डेरेवेयर बिरालोकी फोटोग्राफर हुन् । उनले चारवटा बिरालो पनि पालेकी छिन् । केही समययता मरजान बिरालोको मनोविज्ञान बुझ्ने प्रयास गरिरहेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘बिरालोपिच्छे म्याउँ गर्ने तरिका पनि केही फरक हुन्छ । कतिपय बिरालो बिल्कुल कराउँदैनन् भने कतिपय बिरालो ज्यादा कराउने हुन्छन् ।’ मरजानले पालेका चार बिरालामध्ये एउटा आवारा बिरालो निकै कम म्याउँ गर्ने थियो भने पाल्तु बिरालो तुलनात्मक रूपमा ज्यादा नै म्याउँ गथ्र्यो ।
वैज्ञानिकले के पत्ता लगाए
म्याउँ सुन्नु मानिसको स्वास्थ्यका लागि राम्रो